Wafdi ka socda urur goboleedka IGAD oo ku sii jeeda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Kismaayo:-Wafdi ka socda IGAD iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa la filayaa in ay gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose wafdigaan ayaa waxaa ay safar ku soo mareen magaalada Muqdisho waxaan ay la kulmeen Madaxweynaha DFS Xassan Sh Maxamuud iyagoo ka wada hadlay siddii maamul hishiis lagu yahay loogu samayn lahaa magaalada Kismaayo.
Wafdiga IGAD iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa waxaa ay u ogogol xaarayaan shir weyne la doonayo in uu ka dhaco magaalada Kismaayo shirkaas oo ay IGAD doonayso in maamul Gobolleed loogu magac daray Juba Land State ka samayso Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Gedo iyo Jubada Hoose.
Dowlladaha ku bahoobay ururka IGAD iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa waxaa ay in mudo ah shir kula lahaayeen beelo ka soo jeeda Gobolka Jubada Hoose iyo degaanada ku dhow dhow gudaha dalka Kenya kuwaas oo ay kala hadlayeen qaabkii loo soo dhisi lahaa maamul gobolladeed iyadoo ilaa hadda la xulay xubnaha baar lamaanka uu ka koobnaan doono maamulka walow weli aan si rasmi ah loo shaacin.
Guud ahaan amaanka magaalada Kismaayo, ayaa aad loo adkeeyey, iyadoona inta wafdigu joogo ciidamo dheeraad ah lagu daadiyey goobaha iyo waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo, maamul u samaynta Gobolka Jubada Hoose iyo Gedo ayaa ah arrinta ugu hadal haynta badan iyadoo ay madaxda DFS ay ka biyo diidan tahay maamul u samaynta Gobolka Jubada Hoose oo dhawaan ka baxay gacan ku haynta ururka al-shabaab oo in mudo ah ka arriminayey.